Torohevitra azo atao amin'ny varotra | Martech Zone
Torohevitra fanamafisana ny varotra
Zoma, Febroary 15, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Ireo fantsom-pivarotana fiovana miovaova amin'ny varotra sy ny varotra dia mamaritra ny fomba fanaovantsika orinasa. Manokana, io dia manondro ny fomba fanatonana ny varotra amin'ny vinavina vaovao sy ny fanidiana ny fifanarahana. Ny enablement varotra dia ny fiaraha-miasa amin'ny varotra sy ny varotra nefa mamokatra fidiram-bola. Ny fahazoana antoka fa mifanaraka ireo fandraisana andraikitra ireo dia ilaina amin'ny fahombiazan'ny marketing sy ny varotra.
Amin'ny maha mpivarotra ahy dia mazava ho azy fa zava-dehibe ny ezaka ara-barotra. Saingy amin'ny faran'ny andro (miankina amin'ny toe-javatra), ny ekipa mpivarotra dia mbola hisy fiantraikany "mahery vaika" kokoa amin'ny vinavina iray satria misy ny fifandraisana mivantana sy manokana (raha vantany vao tafasarany amin'ny marketing alàlana na mifandray mivantana). Ny fananana drafitra stratejika momba ny fomba hanatonana ireo vinavina amin'ny fomba fijery dia lasa zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay. Na dia mety ho lava tahaka ny tsingerin'ny marketing aza ny varotra varotra, ny teboka tsirairay avy mikasika ny tsirairay dia afaka mamaritra raha manakaiky kokoa ny hipetraka miaraka amin'ny fanantenana ianao na efa vita ny miresaka aminao mandrakizay.
Raha te hanana antoka ianao fa lavitra kokoa ny fivoriana, dia misy roa torohevitra momba ny fahazoana mivarotra:
Mahazoa fahatsapana momba ny karazana toetranao sy ny fomba fampianaranao. Mianatra sy mandevona ny atiny amin'ny fomba samihafa ny olona. Manokana, misy karazana fianarana 3: auditory, visual, ary kinesthetic.
Raha toa ka mianatra amin'ny "fihainoana" izay lazainao ny prospekanao dia alao antoka fa ampidiro podcast, rohy ara-tsosialy, na horonan-tsary ao amin'ny tolo-kevitrao. Ireo no fampitaovana atiny izay hanako amin'ity karazana fanantenana ity.
Raha toa ka toa mamaly bebe kokoa amin'ny kisary, tabilao na sary ny fanantenanao dia manana mpianatra mianatra maso ianao. Ity no karazana mianatra malaza indrindra. Karazana atiny marobe no manintona an'ity mpianatra ity - horonan-tsary, sary an-tsary, ebooks, whitepapers, sary, sns. Raha "asehonao" ny vinavinanao momba azy, dia azo inoana fa ho azon'izy ireo kokoa ny lanjany amin'izay lazainao.
Ary farany, ao ireo mianatra kinesthetic, izay mianatra amin'ny fanaovana. Ity dia somary sarotra kokoa hiatrehana ny fomba fijery marketing amin'ny atiny, saingy azo atao izany. Tian'izy ireo ny torolàlana na "fomba" hanoroana azy ireo hoe "ahoana" izy ireo hahomby. Ny whitepapers, ebooks, horonan-tsary, ary tranonkala web izay mifantoka amin'ny fanatanterahana zavatra iray dia tsara ho an'ity karazana fanantenana ity. Ny fanehoana fahaizana sy ny fanomezana izany fahalalana izany dia zava-dehibe.
Tandremo ny lalana rehetra mety hitranga. Amin'ny ankapobeny, tsy misy mpanapa-kevitra amin'ny orinasa iray. Ny fanapaha-kevitra hampiasa vola amin'ny serivisy na vokatra iray dia fanapahan-kevitry ny ekipa. Na dia misy aza ny olona sasany izay miteny betsaka noho ny hafa, dia ilaina ny manantona antoko maro ao anatin'ny fizotry ny fanapaha-kevitra.
Iza no vokatrao na serivisinao hahazo tombony? Mety ao anatin'izany ny marketing, varotra, opération, ary exec (tsipika farany). Fantatrao ve ny fomba hanampian'ny vokatrao / serivisinao ny tsirairay amin'ireo olona ireo?
Mahita fitomboan'ny antso miantso-to-hetsika izahay. Raha tokony hilaza ny fahatsinjovan-javatra hanao zavatra ny orinasa dia mametraka fanontaniana mba hampirisihana ny tsindry amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny olona manapa-kevitra mifototra amin'ny zavatra mety indrindra ho azy ireo - ny atiny manodidina ny “personas” dia hanampy amin'ny fandresen-dahatra ny fanapahan-kevitry ny ekipa.
ny mpanohana ny tolo-barotra, TinderBox, dia manome fotoana iray hamoronana tolo-kevitra momba ny haino aman-jery manankarena izay hahasarika ny karazan'olona mianatra rehetra, ary koa hahafantatra izay mijery ny tolo-kevitrao. Ireo metrika ireo amin'ny farany dia hanampy amin'ny fanakatonana ny fifampiraharahana sy hampivelatra ny lisitry ny mpanjifa. Fitantanana tolo-kevitra momba ny varotra no lakilen'ny fahombiazana amin'ny fahazoana mivarotra. Ny fianarana mamorona tolo-kevitra mahomby amin'ny varotra dia hampitombo ny fiovam-po sy ny tsindrio.
Inona avy ireo torohevitra manampy amin'ny varotra hafa anananao? Inona koa no hitanao eo amin'ny indostria?
Tags: fifandraisanaContent Marketingfizahana-taratraFanamafisana ny varotratorohevitra momba ny fahazoana mivarotra
Fomba fanao SEO tsara indrindra amin'ny pejy 2013: Fitsipika 7 amin'ny lalao